CHINOOK IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Chinook Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
'Kodiac Bear yanga iri imbwa huru kudaro… saka munaKurume wegore rino takawana imwe Chinook pup (Rivertrail Oz). Ivo vaviri havakwanisi kuparadzaniswa uye shamwari huru. Hunhu hwavo hunopikisana nepolar: Ko anochenjerera kutenderedza vavasingazive, akadzikama uye akapfava, akanyanya nyore kudzidzisa. Oz ane rowdy, anoda kunanzva kumeso kwemunhu wese nemhuka yaanoona, izwi (kakacheneruka, kunyangwe paanenge akarara kumakumbo ako anozopopota zvishoma ...) uye akazara nechido kupfuura zvaiita Kodi pup (asi inopenya kwazvo, saka haina kunetsa kudzidzisa… inongoda kuenderana). Hurricane Kodiac Bear (ane makore makumi maviri nemaviri mwedzi) uye Rivertrail Oz (makore matanhatu mwedzi). Unogona kuona kushatirwa kwakatenderedza mutsipa waKai pamufananidzo (uye paOz pamufananidzo uri pazasi)… akakwana kuvadzivirira pakubata kudhonza. '
Iyo Chinook ine compact muscular furemu inokodzera iyi imbwa nyoro sled imbwa. Muviri wakanyatsoenzana chipfuva chakadzika zvine mwero pfupa uye inoshanduka tsandanyama dzakakurumbira. Ganda mumusoro rakamanikana risina kuunyana. Iyo yekumira ine mwero uye kune furow inomhanya yakatwasuka kubva pakamira kuenda kune occiput. Iyo tomu ine simba uye meno ari kutsungirira. Ngoro yerudzi rwevheiri, pane mhepo-inopepereswa uye yakakotama, inopa imbwa kuziva uye kukumbira kubwinya zvisinei, nzeve dzinogonawo kubayiwa. Mhino ine mhino dzakakura dzakafara, dzinofanirwa kuve dzakasviba dema, uye dzinojekesa zvishoma pamusoro pemuromo. Miromo yakasviba muvara. Muromo wepamusoro unorembera muromo wezasi zvishoma uye makona emuromo wezasi anomboperera. Mazino anosangana mune chigero kuruma. Iwo maziso akafanana nemaamondi uye akaenzana saizi, ine chirevo chakangwara. Meso machena machena anosarudzwa, asi akareruka, amber maziso anogamuchirwa. Maziso eziso akasviba-pigmented. Tsoka idenderedzwa, dzakasimba uye dzakaumbana, dzakasungwa zvakanaka, zvigunwe zvakasungwa zvakanaka uye dzakaomarara, dzakasungwa zvakadzama, dzakasviba-zvine mavara mapadhi. Zvigunwe zvine hunyanzvi hwewebhu uye tsoka dzakatsetseka, kunyangwe pakati pezvigunwe. Tsoka dzekumberi dzinotendeuka zvekunze zvishoma. Madonhwe enhunzi anogona kubviswa kubva kumakumbo epamberi uye, kana aripo, anowanzo bviswa kubva kutsoka dzekumashure. Muswe wakakora pamudzi uye tapers kusvika kumusoro. Imbwa painomira, muswe unorembera pasi, ungangoita kumakona. Imbwa painofamba, muswe unosimudzwa. Muswe weChinook hauna kumbomiswa. Chinook ane jasi rakapetwa rebvudzi repakati nepakati. Iri jasi rakakora, rakapfava, uye rakadzika mukugadzirwa. Bhachi rekunze rakakora uye vhudzi rakarara pedyo nemuviri. Majasi mashoma dense akajairika munzvimbo dzinodziya. Mutsipa wakanyatso shongedzwa nevhudzi, iro rinogadzira ruff yekudzivirira inosanganiswa muapuroni. Mboro yakanyatsopetwa, iine bvudzi refu pazasi nepasi pemuswe. Iyo groin uye mukati memakumbo ekumashure zvinodzivirirwa nejasi. Muvara, iyo Chinook tawny (yegoridhe fawn).
Izvi zvakazvipira, zvinoshanda nesimba uye zvine mutsindo imbwa dzakapetwa . Kuita kwavo kwakapihwa basa ndiko kwavo kwekutanga kunetseka muhupenyu. Pamusoro pekukweva maslede, rudzi urwu zvakare runogona kushandiswa kutakura, kuteerera, kubhururuka, kutsvaga uye kununura, uye kurongedza. Iko kuvakwa kwembwa, pamwe nekufamba kwayo kwekukurumidza uye kutyaira, kuriita imbwa huru yekugona. Imwe yemakiyi emhando dzekuberekesa hunhu hwaChinook: kudzikama, kusaita hasha, nechido, hushamwari hunhu. Chinooks dzinozvarwa kushanda muzvikwata uye haifanire kuratidza imbwa-hasha. Kunyangwe iine hunyoro, kunyangwe hunhu, iyo Chinook imbwa inokudzwa. Shamwaridzana zvakanaka kuvadzivirira kubva mukuchengetwa nevasingazive kana nharaunda dzisina kujairika. Mukuita, iyo Chinook inoyevedza asi ine chinangwa, yakangwarira asi yakadzikama. Kutaura kwake kunoratidza kungwara kwake ngoro inodada inoratidza chiremera chake. Mazhinji maChinook anoita zvipfuwo zvakanaka kwazvo zvevana, kunyanya kana imbwa ichinge yasimudzwa navo (kunyangwe nevana vane hasha uye vanowira). Mazhinji maChinooks anoshivirira vana kunyangwe kana vasina kana hukama navo. Idzi imbwa dzakavimbika zvisingaite. Ivo vanoshanda zvakakwana zvakavimbika kure-leash uye vanonyatsoda chete kuve newe. Yakapihwa maeka nemaeka epasi, imbwa dzinowanzo kuve chero kwaunenge uri saka kuva nenzvimbo yakawanda hachisi chinhu chinodiwa, asi iwe unofanirwa kuzvitorera kufamba kwemazuva ese uko kwavanoitwa chitsitsinho padivi kana kuseri kwako, kusambotungamira kumberi, saiyo pack mutungamiri anotanga kutanga . Iyo Chinook inoda kuve padyo nemhuri yayo uye chikamu chemhuri. Havaiti mhuka dzakanaka dzekunze. Iyo Chinook kazhinji yakanaka ne dzisiri-canine dzinovaraidza . Vanoda muridzi anovimba uye akasimba navo, asi kwete nehasha. Kana iwe uri pasive navo, ivo vanozove vane simba rekuda. Vanoda kuratidzwa kuti ndiani ' imbwa yepamusoro '. Chinooks anodzidziswa zviri nyore kuburikidza nekusimbisa kwakanaka, asi usapindure kune anorema-ruoko ekudzidzisa matekiniki. A dzikama chiremera mu nzira iyo imbwa dzinogona kunzwisisa zvakanaka. Ivo vakangwara kwazvo, uye vanongoda kuziva zvaunoda kuti vaite.
Kureba: Vanhurume 23 - 27 inches (58 - 69 cm) Vakadzi 21 - 25 inches (53 - 64 cm)
Kurema: Vanhurume paavhareji 70 mapaundi (32 kg) Vakadzi avhareji 55 mapaundi (25 kg)
Aya anotevera mamiriro ehutano akaitika mukati meiyo yakazara Chinook kuberekana: kunyara kwakanyanya, kusanzwisisika kwemaziso, hudyu dysplasia, mahormone ganda matambudziko, mono / bilateral cryptorchidism, pfari uye spondylosis. Kazhinji, rudzi rwacho rune hutano uye zvirwere izvi zvinoitika muchikamu chidiki chevagari. Vaberekesi vari kushanda nesimba kuongorora imbwa nezvirwere zvese zvakanyorwa pamusoro, uye vatengi vanofanirwa kuona kuti vabereki vembwanana vanozivikanwa sevasina chirwere cheziso nehudyu.
Chinooks vanoita imbwa dzakanaka dzemafurati chero bedzi muridzi achizvipira kuzviita kurovedza muviri nekufamba. Ivo havahukure kazhinji uye vanogona kusiiwa vakavimbika mushure mehudiki kwenguva yakati. Kusiyana nedzimwe shamwari dzekuchamhembe, imbwa idzi hadziite yakanaka yekunze zvipfuyo. Ivo vane hunyanzvi hwepamoyo, uye kuzviparadzanisa nehukama hwevanhu kunokonzeresa kuzvidya moyo nekumwe kunetseka kwepfungwa. Idzi imbwa hadzifanirwe kuchengetwa kuseri kwemba uye dzinofanirwa kugara dzichionekwa sechikamu chemhuri.
Chinooks inoda mwero kurovedza muviri uye haisi hyper imbwa, asi inofanira kutorwa kune a kufamba kwezuva nezuva . Kamwe kurovedza kwapera, iyo imbwa inozvivaraidza nyore kana kuzorora.
Anenge makore gumi nemashanu
Dzinenge nhanhatu kusvika kugumi imbwa
Jasi reChinook rinozvitarisira roga uye rinoda kushambidzika kushoma. Chinooks vane jasi rakapetwa maviri rine undery pasi jasi uye kosi yepamusoro. Vamwe varidzi veChinook vakashuma imbwa dzavo dzakateurwa kaviri pagore kweinenge vhiki svimwe, ivo vanodurura zvishoma. Vamwe vakaudza imbwa dzavo kuti dzidurure zvakanyanya gore rese. Mumwe muridzi akati, 'Kodi anonyurura ZVESE zvakanyanya kusvika gore rese (kunyangwe tichigara tichikwesha bhachi rake). Oz zvakare anodurura-kunyangwe kusvika parizvino kwete zvakanyanya seKare. Ndinofunga chero munhu ane Chinook anofanira kunge akagadzirira imbwa bvudzi mumba. '
Caucasian gomo imbwa yakazara yakazara
Iyo Chinook rudzi rwekuNorth rwunotorwa kubva kune imwechete tateguru. Ivo baba verudzi, Chinook, akazvarwa pamunyori / muongorori Arthur Walden's Wonalancet, purazi reNew Hampshire muna 1917. Aive mumwe wevana vatatu vakazvarwa nemukadzi 'weNorthern Husky', akapepetwa neimwe yembwa pachikwata chePeary's North Pole . Sino raSinook raive imbwa hombe, yakavhenganiswa-yakasangana. Chinook yaive 'mutambo,' chinoshamisa chechisikigo, chisina kufanana nemumwe wevabereki vake. Akanga ari imbwa yakakwenenzverwa imbwa uye akaperekedza Admiral Byrd's South Pole kufambira muna 1927. Chinook vana, vakagara nhaka yake coloring, saizi uye zvakajairika hunhu, vakaberekwa kusanganisa simba rehombe yekutakura imbwa nekumhanya kweiyo diki mijaho sled imbwa. Mukutanga kwema1900, iyo Chinook yakaisa marekodhi edaro akafukidzwa, mitoro yakatakura uye inomhanya nguva. Rudzi urwu rwakaverengerwa kuburikidza nemakore nenhamba diki yevakazvipira vafambi. Iyo Chinook rudzi rwakanyanya kushomeka. Bhuku reGuinness reWorld Records rakanyora Chinook sembwa isingawanzobatika pasi rose muna 1966 paingova ne125 chete. Iyo Chinook yaimbove yakatanhamara imbwa yakakwenenzverwa, asi muma1980 rudzi rwacho rwaive rwunenge kutsakatika , kwasara imbwa gumi nembiri dzinoberekerwa pasirese. Sled drive yavo yakaderedzwa zvakanyanya. Idzo imbwa dzinowirirana zvikuru dzinokwanisa kuita chero basa ripi zvaro, asi dzinonyatsoda sledding, skijoring uye carting. Ivo vakanyanya kugona kutakura nekuti, kusiyana nevamwe vavo vekuSiberia neAlaska, ivo vanodzidziswa zviri nyore mukuteerera uye vanogona kushanda vakadzikama zvikuru mukusunga. Vafudzi vari kushanda kuti vawane kuzivikanwa zvakanyanya uye vari kushingairira kutsvaga sledders kuti vashande nevaberekesi muzvirongwa zvinosimbisa hunhu hwekushanda. Chinook yakagamuchirwa neUnited Kennel Club munaKurume 1991. United Kennel Club yakashanda neCOA (Chinook Owners Association) kugadzira chirongwa chekuuchika, icho chinoshandisa imbwa dzakatanga kuberekerwa mumhando iyi kuti dziumbe kusiyanisa uye hutano mugen'a . Iko kune maitiro ekunyorera, akaomesesa nhungamiro, uye komiti yekutarisira chirongwa chose. Pakupera kwechirongwa, imbwa dzinozokodzera kunyoreswa muUKC. Mukufamba kusati kwamboitika, iyo UKC zvakare inobvumidza isina kugadzikana Chinook Crosses kuve LP yakanyoreswa. (Imbwa chete dzakasaswa / dzakasungwa dzisina kuchena dzinogona kuve LP yakanyoreswa muUKC.) Iyo Chinooks New England Club ndeimwe yemakirabhu ehukama eECA. Ivo vari kushandawo nesimba mukuchengetedza rudzi.
goridhe retriever yakasanganiswa ne chow
KANA = American Rare Breed Association
CWNBC = Chinooks Pasi Pose - National Breed Club
CHIKAMU = Federation of Rare Breeds
Hurricane Kodiac Takura iyo Chinook pamwedzi gumi nematanhatu
Hurricane Kodiac Takura Chinook pazera remwedzi gumi nematanhatu kunze kwechando
GreatMountain Chikwata Mushing kupinda 2000! Chinooks uye imwe Husky, GO TEAM GO !! Mufananidzo neruremekedzo rweGreatmountain Chinooks
CH WoodsRunner Allagash Springs TT, foto nemvumo yeGreatmountain Chinooks
Hurricane Kodiac Takura Chinook sediki mwana wembwanana akagara muchando
Hurricane Kodiac Takura iyo Chinook sediki mwana wembwanana
'Rwendo urwu, Chinook ane makore maviri. Iye ane hupenyu hwakanyanya, go-getter rudzi rwembwa. Iye akadzidziswa kusvetuka uye haugone kana kubata bhegi rechikepe iye asina kusvetuka nemufaro! Isu takamudzidzisa zvichibva pamaitiro aCesar Millan (kurovedza muviri, kuranga, rudo) uye Rwendo rwakaratidza kuve imbwa yakanyatsogadzikana, inoshamisa imbwa. Mabasa ake aanofarira anosanganisira kutamba fetch, skijoring, kuenda kunokwira bhasikoro uye anoenda ku imbwa paki . Maitiro aCesar, kana akaitwa nenzira kwayo, anoshanda kwazvo, ndakanyatsozviona kubva pane zvakaitika. '
Rwendo rweChinook kutora kurara pamubhedha
'Uyu ndiTory Chinook. Izvo ipfupi kune 'Kukunda Kufara.' Akawana zita rake nekuti akarwara zvakanyanya sembwanana uye akapotsa afa. Asi Tory parizvino anofara uye akagwinya, muridzi wake 'anodada kumudana kuti wangu!' '
Tory Chinook achifamba neuswa.
Ona mimwe mienzaniso yeChinook
Chinook Mifananidzo 1
chow chow uye goridhe retriever musanganiswa
husky musanganiswa nebhuruu mhino pitbull
shar pei nhema lab kusanganisa
yakawanda sei nzombe mastiff huremu
nhema uye chena staffordshire terrier
labrador retriever chow chow musanganiswa